Tsy maintsy miantoka ny orinasa kanefa… famonoana orinasa tsotra izao izany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Andro maneran-tanin'ny mahantra (tapany faharoa) il y a 15 heures
Tsy manara-penitra izany izay tsy afaka mampiasa ordinatera ? il y a 17 heures
Le paranoïa du colisée d’Antananarivo il y a 20 heures
Nanangona JRR il y a 4 mois
Avelao hiasa ny fitateram-bahoaka ary ampodio ireo izay lavitry ny fianakaviany. Tohano sy zarao izao sosokevitra izao raha mety aminao.
Fanapahan-kevitra tsy mora kanefa nirosoana ny fivoahana miandalana amin’ny fihibohana eto Madagasikara, na dia hita aza fa mbola maro ny madilana ho tentenina amin’ireo fepetra noraisina.
Ny Roso ho amin’ny Demokrasia Sosialy (RDS) dia mijoro hatrany amin'ny fitondrana hevitra tsy misorona ary tsy ijerena arina an-tava mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka sy ny soa iombonana satria Madagasikara dia toy ny « lakana tsy mifidy andriana, ka raha rendrika lena avokoa ».
Manoloana ny fahasahiranan’ny valalatsimandadiharona amin'ny fanatanterahana ireo fepetra tsy maintsy hajaina mandritra ny 15 andro manaraka indray, dia miantso ny tompon’andraikitra izahay mba :
(1) Hamela ireo fiara mpitatitra olona isaky ny renivohi-paritany sy ny manodidina azy ireo hiverina hiasa ho fitsinjovana ireo mpanjifa sy ny asan’izy ireo :
- Azo tanterahana izany rehefa hentitra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana na ny mpandeha na ny tompon’ny fiara : fampiasana aro vava sy orona, tsy fampiasana ireo seza fanampiny. Ambonin’izany ny famendrahana rano-panafody matetika ny fiara, ny fampitaovana fanadiovan-tanana ;
- Ho fifampitsimbinana anefa dia tsara raha hapetraka ny « vonjy vola » izay hanomezana fanampiana isan’andro (andro iasana) mitentina :
(a) 24.000 Ar ho an’ny fiara lehibe mahazaka 32 toerana,
(b) 15.000 Ar ho an’ireo fiara mahazaka 27 toerana,
(d) 12.000 Ar ho an’ireo fiara mahazaka 14 toerana.
Mitentina 600.000 $ US ny vola mety hilaina amin’izany, izay tokony hiantsorohan’ny Fitondrana tanteraka,
(2) Sokafana – arahana fepetra – ny fitateram-bahoaka an-tanety sy hanabakabaka mampifandray ny faritra, na dia amin'ireo ahitana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 aza toy ny Faritra Analamanga. Ireo mpandeha mivoaka na miditra – ankoatry ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana – dia mila misoratra anarana efatra andro mialoha ary hanaovana fitiliana ka izay tsy mitondra ny tsimokaretina ihany no mahazo mandeha. Ho voaaro ny tsy fiparitahan’ny valanaretina no hitombo ny isan’ireo vita fitiliana.
Izany rehetra izany dia azo hatao tsara mandritra izao fihibohana 15 andro vaovao izao, ary hanala ampahany betsaka ny fahasahiran’ny mponina no manampy ny Fitondrana amin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina ary indrindra hanamaivana ny fahasahiranam-bahoaka sy ny voka-dratsin’ny hamehana ara-pahasalamana izao.
Fandalinana : Andro maneran-tanin'ny mahantra (tapany faharoa) - il y a 15 heures
Fampianarana ny zaza malagasy : Tsy manara-penitra izany izay tsy afaka mampiasa ordinatera ? - il y a 17 heures
Impact d'un projet sur l'économie : On peut remplacer le riz par le soanambo - il y a 2 jours
Economie maritime : Petite pêche en péril: Madagascar signe des accords de pêche destructeurs avec des investisseurs chinois - il y a 9 jours